Maydad iyo Hub ay ka carareen ciidamo huwan ah oo lagu soo bandhigay Mubaarak. – Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan
On Sep 14, 2018 275 3
Deegaanka Mubaarak ee wilaayada islaamiga ee Shabeellaha hoose oo dhawaan uu ka dhacay weerar fashilmey oo ciidamada Maraykanka ku doonayeen iney ka geystaan halkaas ayaa waxaa lagu soo bandhigay meydad iyo saanad milliteri.
Meydka Askari soomaali ah oo ay ugu buufsantahay Gaashaan ayaa kamid ahaa meydadka lagu soo bandhigay deegaanka Mubaarak
Dhanka hubka, waxaa lasoo bandhigay saanad kala duwan oo hub ah oo uu ku jiro qori uu Doorbin ku xiranyahay, boosh qalabeysan iyo qasnadihiisa, Wakobyada ay ciidamadu u adeegsadaan isgaarsiinta iyo waxyaabo kaloo kala duwan.
Sahal says 3 years ago
Naarta Allah ha u sii jiido gaalka, wuu ogaa wuxuu ka garab dagaallamayaa inay gaalo yihiin. isagaa doortay inuu dariiqa jahannam qaado, Allah haku fogeeyo asaga iyo kuwa kale ee gaalada garabka u noqday iyagoo shilimo raacaya.
Said says 3 years ago
Aad baan ugu faraxsanahay jabka sogaray galad iyo galraca
Asc ikhwa allah idn xifdiyo